Ny kabinetra New Airbus Single-Aisle Airspace dia manampy fampiononana amin'ny sidina Lufthansa
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny kabinetra New Airbus Single-Aisle Airspace dia manampy fampiononana amin'ny sidina Lufthansa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Septambra 6, 2021
Lufthansa dia indray nanao safidy safidy fanavaozana sy fiantsoana ny mpandeha, nampiakatra ny fisotroana ho an'ny besinimaro manidina amin'ny ankapobeny mba hiaina ny fanavaozana farany ambony, Airbus mitarika kabinetra.
Lufthansa dia manomboka miasa ny fiaramanidiny voalohany amin'ny Single-Aisle Airspace kabine.
Maherin'ny 80 ny fiaramanidina A320 an'i Lufthansa hasiana kabine vaovao.
Lufthansa dia manohy mifantoka mafy amin'ny vokatra premium ho an'ireo vahininy.
Lufthansa dia nanomboka niasa tamin'ny fiaramanidina A320 Family voalohany - A321neo - misy ny tranokely Airbus 'Single-Aisle Airspace an'ny Airbus. Raha manao izany, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia lasa mpandraharaha voalohany any Eropa nampahafantatra ireo fiasa vaovao ho an'ny mpandeha Airspace ho an'ireo mpandeha amin'ny fiaramanidina A320 Family. Tamin'ny taona 2018 Lufthansa Group, mpanjifa A320 Family efa ela, dia nisafidy ny hampita ny mihoatra ny 80 amin'ireo fiaramanidina A320 Family vaovao amin'ny baiko avy amin'ny Airbus miaraka amin'ny cabins Airspace.
Ny endri-javatra Airspace vaovao dia misy: takelaka sidewall manify ho an'ny habaka manokana eo amin'ny haavon'ny soroka; fomba fijery tsara kokoa amin'ny alàlan'ny varavarankely miaraka amin'ny bezelany nohavaozina sy alokaloky ny varavarankely feno; ny fitoeram-bokatra lehibe indrindra misy kitapo 60% fanampiny; ny haitao farany hazavana LED farany feno; 'Faritra fidirana' misy jiro LED; ary lavarangana vaovao misy endri-javatra tsy misy fika ara-pahadiovana sy faritra antimicrobial.
"Lufthansa dia nisafidy ny fanavaozana sy ny antso amin'ny mpandeha indray, hampiakatra ny bara ho an'ny besinimaro manidina amin'ny ankapobeny hiaina amin'ny ambaratonga manaraka, Airbus fitarihana kabary vaovao ”, hoy i Christian Scherer, Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra Airbus ary Lehiben'ny International. "Faly aho mandray ny iray amin'ireo mpiara-miasa maharitra amintsika, Lufthansa, ho lasa mpandraharaha eropeana voalohany ho an'ny tranokala A320neo Family Airspace. Tsy andriko ny hisidina amin'ny iray amin'ireo fiaramanidina ireo. ”
"Na inona na inona krizy, dia mifantoka hatrany amin'ny vokatra premium ho an'ireo vahininay izahay," hoy i Heike Birlenbach, Lehiben'ny traikefa ho an'ny mpanjifa, vondrona Lufthansa. “Ho anay, ny premium dia midika ho fanomezana an-kalitao avo lenta sy manokana ary mety ho an'ny mpandeha rehetra amin'ny fotoana rehetra. Miaraka amin'ny Airspace Cabin vaovao, manatsara ny traikefa amin'ny dia amin'ny zotram-pitaterana an-tongotra fohy izahay ary mametraka mari-pahaizana indostrialy vaovao. ”
Lufthansa dia niasa ny fianakaviana A320 hatramin'ny taona 1980 ary izy no mpandraharaha voalohany tamin'ny A321 sy A320neo. Ny vondrona fiaramanidina dia iray amin'ireo mpandraharaha Airbus lehibe indrindra manerantany.
Tamin'ny faran'ny Jolay 2021, ny A320neo Family dia nahazo baiko maherin'ny 7,400 avy amin'ny mpanjifa 120 manerantany.